I-ICT - iShenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
I-Fumax izokwakha i-ICT ebhodini ngalinye ukuhlola ukuxhumana kwebhodi nemisebenzi.
I-ICT, eyaziwa nge-In-Circuit Test, iyindlela yokuhlola ejwayelekile yokuhlola ukukhubazeka kokukhiqiza kanye nokukhubazeka kwengxenye ngokuhlola izakhiwo zikagesi nokuxhuma kukagesi kwezinto eziku-inthanethi. Ihlola ikakhulukazi izingxenye ezilodwa kulayini kanye nesekethe evulekile futhi emfushane yenethiwekhi ngayinye yesifunda. Inezici zendawo elula, esheshayo nenembile yephutha. Indlela yokuhlola esezingeni lengxenye esetshenziselwa ukuhlola ingxenye ngayinye ebhodini lesifunda elihlanganisiwe.
Ukuhlolwa okuku-inthanethi imvamisa kuyinqubo yokuqala yokuhlola ekukhiqizweni, engakhombisa izimo zokukhiqiza ngesikhathi, ezifanele ukucubungula ukwenziwa ngcono nokuphakanyiswa. Amabhodi amaphutha ahlolwe yi-ICT, ngenxa yendawo enephutha enembile nokulungiswa okulula, angathuthukisa kakhulu ukusebenza kahle kokukhiqiza futhi anciphise nezindleko zokugcina. Ngenxa yezinto zayo ezithile zokuhlola, ingenye yezindlela ezibalulekile zokuhlolwa kokuqinisekiswa kwekhwalithi yesimanje enkulu yokukhiqiza.
2. Umehluko phakathi kwe-ICT ne-AOI?
(1) I-ICT incike ezicini zikagesi zezinto ezisebenza ngogesi wesekethe ukuzihlola. Izici zomzimba zezinto ze-elekthronikhi nebhodi lesifunda zitholwa yimvamisa yamanje, i-voltage, kanye ne-waveform frequency.
(2) I-AOI iyidivayisi ethola ukukhubazeka okuvamile okuhlangatshezwane nakho ekukhiqizeni nge-soldering ngokuya ngesimiso se-optical. Imidwebo yokubukeka kwezingxenye zebhodi lesifunda ihlolwa ngokufanele. Isifunda esifushane sahlulelwa.
3. Umehluko phakathi kwe-ICT ne-FCT：